कैलासकुट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषयका शिक्षक
कोरोनापछि निकै कमजोर अवस्थामा अर्थतन्त्र झरेको बेलामा नेप्सेले अप्रत्याशित छलाङ लगाउँदै जाँदा २०२० को अन्तिम दिन ३० डिसेम्बरमा सबैभन्दा बढी उचाइ प्राप्त गर्दै २०८७ को कीर्तिमानी उचाइ छोयो । यसरी २०७७ साल असारदेखि पुससम्ममा शेयरबजारलाई उचाइमा ल्याउनमा केही कम्पनीको योगदान निश्चय पनि प्रभावकारी छ ।
कुनै जमाना थियो, शेयरबजार आम व्यक्तिको पहुँच र सोचबाट धेरै पर थियो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएर देशले निजीकरण, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको नीति अवलम्बन नगर्दासम्म २०४८ देशमा शेयरबजारको कारोबार गर्ने कुनै आधिकारिक निकाय नेपालमा थिएन । तर, विश्वमा यसको प्रचलन थियो । नेपालको सन्दर्भमा धितोपत्र कारोबारको शुरुआत २०४९ सालपछि भयो र यसले विस्तारै गति लिन थाल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने अनेक कर्मचारीलगायत केही व्यापारीहरू विस्तारै शेयर कारोबारीका रूपमा थपिँदै गए । शुरूको दिनमा अनजानपूर्वक शेयरमा लगानी गर्नेहरू अहिले ठूला खेलाडी नै बनेका छन् । कोरोना अगाडि नेपालमा कारोबारी थिए । तर, अहिले जस्तो बेग्रल्ती संख्यामा लगानीकर्ता थिएनन् भन्ने कुरा हितग्राही खाताधारकको संख्याले अंकित गरेको छ ।
सरकारले नाकाबन्दी लागू गरेपछि देशका लगभग ९० प्रतिशत आर्थिक कारोेबार ठप्पप्रायः रह्यो । मानिसको आम्दानी पनि सुक्यो र लगानीका अवसर पनि सुस्तायो र ठीक त्यसैबेला नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको आईपीओ चैत महीनामा खुल्यो र यसमा आवेदन दिने जति सबैले न्यूनतम ४० देखि ५० कित्ता शेयर प्राप्त गरे ।
नेपालको इतिहासमा शेयरबजारलाई उँचाइमा लैजान यो आईपीओ एक कोसेढुंगा सावित भयो । सम्भवतः यो कम्पनीको शेयर पहिलोपटक कुनै प्रकारको उतारचढाव विना भर्ने जति सबैलाई प¥यो । रू. १०० मा भरेको शेयरको मूल्य १८०० सम्म पुग्यो । यो कम्पनीको शेयरको मूल्य वृद्धिले गर्दा नेपालमा सबैभन्दा बढी शेयर उन्मुख जनचासो फैलिएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
असार १५ गते कोरोना त्रासका बीच खुलेको शेयरबजारमा पहिलो दिन केही गिरावट आए पनि त्यसपछि बजार उकालो चढेको छ । नेपालका टेक्नोक्रेट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा कहिल्यै पनि बजारमैत्री नभए पनि असार, साउन र भदौमा एकातर्फ नेपाल पुनर्बीमाको शेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदै जानु अर्कोतर्फ ठूला शेयर खेलाडीहरूले पुनर्बीमा बेचेर भए पनि हिमालयन डिस्टिलरीको शेयर थुपार्न थालेको घटनाले नेपालको शेयर बजारमा उचाइ बढ्दै गएको थियो ।
हितग्राही खाताप्रणालीको शुरुआतपछि २०७६ चैत १० अर्थात् बन्दाबन्दीको पहिलो दिनसम्म जति डिम्याट खोलिएका थिए । त्यो भन्दा कैयाैं गुणा बढी डिम्याट त्यो समयपछि खोलिए । अहिले पनि दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता यो खाता खोल्दै आईपीओमा च्याँखे थाप्नेको संख्या दिनानुदिन विस्तार हुँदै छ । यो कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अझ टुंगोमा छैन । जेहोस्, आजको मितिमा शेयरबजार अधिकांश मानिसको लगानीको आधार बनेको छ । दर्जनौं आलोचनाका माझ नेपालमा अहिले शेयरबजार आर्थिक कारोबारको गुरुत्वमा अडिएको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ पूरै बिक्न पनि मुश्किल भएको सन्दर्भमा अहिले ओभर सस्क्राइब भइरहेको छ । प्रभु लाइफ इन्स्योेरेन्समा ५ लाखभन्दा बढी आवेदक अभिलाषीको हात खाली र≈यो । साधना र समाज लघुवित्तको आईपीओका खाली हात हुनेको संख्या पनि असंख्य छ । यसरी कारोनाले हो वा पुनर्बीमाले आज मानिसमा शेयर बढी खरीद गर्ने र प्रोफिट बुक गर्नेको होड चलिरहेको छ । साउनमा १७०० मा किन्न पाइने एचडीएलको शेयर मूल्य अहिले ५४०० को वरिपरि पुगेको छ ।
अंग्रेजी महीनाको पछिल्लो दिन सबैभन्दा बढी ४६ करोड बढीको शेयर किनबेच भएको एचडीएलको साउनको शुरूतिर १७०० मा ५०० कित्ता किनेर बसेका एक साथीको हाउभाउ पुस १६ गते देख्नलायक थियो । उनले पुनर्बीमाको शेयर बेचेर १७०० मा हिमालय डिस्टिलरीको शेयर किनेको सत्य र अहिले त्यो कम्पनीको मूल्य बढाइको अवस्था हेर्दा लाग्छ, शेयरबजारमा व्यापक पूर्वानुमान हुने रहेछ ।
केही दिन अगाडि एक शेयरबजार खेलाडीले एनआईसी एशियाको शेयर किन्न सुझाव दिने शुभचिन्तकको भनाइ मानेको भए अहिले राम्रै हुने रहेछ भन्ने लागेको छ । जे होस् नेपालको शेयरबजारमा नागरिक लगानी कोष, शिवम् सिमेन्ट, विशाल बजार कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरले पनि नेप्सेको शेयर वृद्धि गर्नमा राम्रै भूमिका खेलेका छन् । तर, १०० प्रतिशत, आधा बोनससहित लाभांश दिएको हिमाल डिस्टिलरी, २४ प्रतिशत नगद लाभांशमात्र दिएको शिवम् सिमेन्टका साथै केही पनि लाभांश नदिएको पुनर्बीमा कम्पनीको कारणले नेपालमा शेयरबजार तताउनमा ठूलो भूमिका खेलेकाले यी कम्पनीलाई भारतमा १०० करोड कमाउने फिल्मलाई अति सफल मानिएझैं नेपालका हिट कम्पनी मान्नुपर्छ ।
आगामी दिनमा धितोपत्र बोर्डबाट ८ अर्बको आईपीओ निकाल्ने अनुमति पाएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयरले पनि जनमानसमा शेयरबजारमा रौनक ल्याउन सक्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
शेयरबजार पूर्णतया लगानी र चलाखीको खेल हो । कसैले यसलाई जुवा पनि भने तर त्यो सत्य होइन । जुवामा कमसे कम तुरुपको एक्काले एक हात खान्छ भन्ने पक्कापक्की हुन्छ । तर, शेयरबजारमा कहिले काहीँ तुरुप पनि ढुस भएर चिडीको दुक्कीले हात खान्छ । त्यो नहुने भए चैतअघि आईपीओ तल चलेका दर्जनाैं जलविद्युत्को शेयरमा साउन भदौमा सकारात्मक सर्किट कसरी लाग्थ्यो र ?
(स्रोत: अभियान दैनिक)